China Screw conveyor Manufacture and Factory | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny savaivon'ny mpampita volo karazana LS dia 100 mm- Ny halavan'ny masinina familiana fiara tokana dia mety hahatratra 40m (30m be loatra). Ny milina fanodinana kapila roa dia manangana ny firafitry ny hazo vaky afovoany, ary ny halavany farany mety hahatratra 80m (60m lehibe lehibe). Ny halavan'ny milina fitaratra dia 0,5m, izay azo voafantina arakaraka ny filàna. Ny lohan'ny loha sy ny rambon'ny masinina visy dia napetraka eo ivelan'ny akorany Ny fidiran'ny vovoka ao amin'ny efitrano fitondra dia manatsara ny fiainam-panompoana ireo ampahany manan-danja amin'ny mekanisma visy. Ny fiakarana ny vano afovoany dia manana karazana rafitra roa, izay azo ovaina amin'ny famolavolana sy ny fikororohana, miaraka amin'ny fanoherana kely, ny famehezana mafy ary ny fanoherana tsara. Misy metallurgy vovoka, nylon, firavaka Babbitt ary fitaovana hafa ho safidin'ireo mpampiasa arakaraka ny toe-javatra iasana. Ny kaopy misy menaka dia alahatra ivelan'ny masinina mitondra mba hanamorana ny fanosorana menaka sy ny fanosorana. Ny toerana misy ny fidirana sy ny fivoahana dia malefaka, ary ny fivoahan'ny herinaratra dia manampy mba hanamorana ny fifehezana mandeha ho azy. Ny fitaovana fandrefesana haingam-pandeha sy ny fanairana dia azo alamina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpampiasa.
Fampisehoana vokatra sy ny laharam-pahamehana:
Ny milina fitaratra dia nampiasaina be tamin'ny fitaovana fananganana, metallurgy, indostria simika, herinaratra, arina, masinina, indostria maivana, indostria varimbazaha sy sakafo, mety hampita vovoka, granular, akora kely, toy ny simenitra, arintany, voamaina, zezika, lavenona , fasika, koka sns ... Tsy mety ny mitondra ny lozisialy izay mora simba, miraikitra ary moka. Ny mari-pana momba ny tontolo iainana an'ny conveyor an'ny LS dia - 20 ℃ - 40 ℃, ary ny hafanan'ny fitaovana fampitaovana amin'ny ankapobeny - 20 ° - 80 ℃. LS screw conveyor dia mety amin'ny layout marindrano sy zoro kely, ary ny zoro fironana dia tsy tokony hihoatra ny 15. Azo volavolaina manokana sy amboarina izy io.
Previous: Mpampita entana
Manaraka: Conveyor SCG Vibrating
Mpanaparitaka visy tsy misy vy